UKUQESHA UQEQESHO LOMDALI OQEQESHIWEYO WASEINDIYA | PHENDULA UPHUHLISO LWABANTU - IBHLOG
Ukuqesha uQeqesho loMdali oQeqeshiweyo waseIndiya | Phendula uPhuhliso lwaBantu
React Native sesona sikhokelo siphendulayo esiguqule ngokupheleleyo inkqubo yophuhliso lwesoftware, ethe yaziswa nguFacebook kwihlabathi liphela. Oku kwenza ukuba iapps yakho isebenze ngokutyibilikayo, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Zininzi phendula iinkampani zemveli zokuphuhlisa usetyenziso abadlala indima enkulu kumashishini okuqala kunye namashishini. Zininzi iinkampani ezithandwayo eziye zahlengahlengiswa zisabela kwiinkonzo zophuhliso lwendalo kwiimfuno zabo zeshishini ezinjenge-Instagram, umthunywa we-Facebook, u-Uber, uSkype, njl.
Kule bhlog, ndidwelise iinkampani ezili-10 eziphezulu zokuphucula ii-app ezivela kwilizwe liphela, ezisebenzisa ngempumelelo izibonelelo zale nkqubo-sikhokelo.
Iqela leSoftlabs yeyona nkampani iphucukileyo yesoftware eIndiya. Abaphuhlisi bethu baqeqeshwe kakuhle kolu hlaselo lwasekhaya kunye namava ubuncinci beminyaka emi-2 ukuya kwemi-3. Isungulwe ngaphezulu kweminyaka eyi-16 kwaye iqhubeka ngempumelelo. Ngokweqela leSoftlabs, isakhelo sendalo esisabela sinciphisa umthwalo phantse ngeepesenti ezingama-40. Ngaba unokuqesha usabele kubaphuhlisi bomthonyama ngokweemfuno zeshishini lakho ngokusisigxina, ngokungesosigxina kunye neyure nganye.
Kwikomkhulu: I-India, i-USA, i-UK, iSweden ne-Slovenia
I-Atlas ivuliwe :
I-Atlasopen ikhethekileyo kuphuhliso lweapps kunye nentengiso yedijithali. Ngoku bajongana neenkonzo zabo kungekuphela kwiinkampani zase-Australia kodwa nakwihlabathi liphela. Balapha ukunceda ekuyileni izimvo zoyilo, ukusebenzisa uphawu lwedijithali okanye imveliso, kunye nokunxibelelana nabaphulaphuli. Enye yeenkampani eziphambili zophuhliso lwasekhaya e-Australia kwaye ine-repo elungileyo yoluntu kwintengiso yophuhliso lwesoftware.
3) WillowTree :
Kuyaziwa ngokunikezela ngeenkonzo eziphambili zophuhliso losetyenziso kuzo zonke iintlobo zamashishini. IWillowTree ibekwe e-USA kwaye konke malunga nezicwangciso ezifanelekileyo kunye neendlela ezintsha zophuhliso lweapp. Ezi nkampani ziphuhlisa i-IOS, iwebhu, kunye nophuhliso lweapps ngokweemfuno zomthengi.
QSS Technosoft :
I-QSS Technosoft yenye yeenkampani ezaziwayo zophuhliso lwesoftware eIndiya. Le nkampani ilungiselela iinkonzo zayo ikakhulu ukuqala amashishini kwinqanaba lamashishini. Banomqeshwa olungileyo onamava afanelekileyo kwicandelo labo.
Galaxy Weblinks Inc. :
Yinkampani yesiko yophuhliso lwesoftware enolwazi ngetekhnoloji eyahlukeneyo. Zijolise ekuhambiseni izisombululo zekhompyuter ezikumgangatho wehlabathi kuwo onke amazwe aneziphumo ezilungileyo. Sebenzisa ubuchwephesha obuphezulu kunye nokusabela kwendalo.
I-Altasopen yinkampani esekwe kuphuhliso lwesoftware ese-Australia, egxile kuphuhliso lwee-mobile kunye nentengiso yedijithali. Bajongana neenkonzo zabo kungekuphela kwiinkampani zase-Australia kodwa nakwihlabathi liphela. Apha balapha ukunceda kunye nokuyila iingcinga zokuyila, ukusebenzisa igama lakho ledijithali okanye imveliso, kunye nokunxibelelana nabaphulaphuli.Inkampani yabo inabaphuhlisi abangama-70 +, abagqibe iiprojekthi ezili-150 + ngempumelelo kubaxhasi bazo.
Le nkampani yophuhliso lwesoftware ibonelela ngeenkonzo zenkulumbuso kubaxhasi bayo kwihlabathi liphela. Baneqela lomphuhlisi elomeleleyo le-170 + kwaye bayakuqinisekisa ukuba uzisa ezona nkonzo zintle okanye izisombululo kwiimfuno ezahlukeneyo zeshishini.
Kwikomkhulu: Indiya, e-USA
I-JustCoded ikwiLondon kwaye inamasebe amaninzi eCyprus, UK, Ukraine. Bajolise ekunikezeleni izisombululo ezisemgangathweni kubathengi babo kumashishini awahlukeneyo. Ngenxa yeengcinga zabo ezomeleleyo, ezinokwenzakala, kunye nezobuchule, zabenza baba ngabokuqala ukuphendula kwinkampani yemveli yophuhliso.
Nalu uluhlu lweenkampani ezili-10 eziphezulu ezisabela kuphuhliso lwendalo emhlabeni. Banikezela ngeenkonzo eziphambili zophuhliso lwesoftware apho ungakhetha khona nabani na ngokweemfuno zeshishini lakho.Ukusuka kwihlabathi liphela elisebenzisa ngempumelelo izibonelelo zale nkqubo-sikhokelo.
Kwikomkhulu: ECyprus, eUK, eUkraine naseLondon
9) Iitekhnoloji ngokulula:
I-Simply Technologies yaziwa ngokuba isabela njani kwiinkonzo zophuhliso lwendalo. Le nkampani iziva inelunda ngokubhengeza ukuba inenani elikhulu labaphuhlisi abasebenzela uphuhliso lwasekhaya.
Kwikomkhulu: ENew York
Unxibelelwano lweLits :
Lits ikhonkco yinkampani yophuhliso lwesoftware ye-IT ebonelela ngesisombululo sesoftware esibanzi kumthengi wabo. Isungulwe ngaphezulu kweminyaka emi-5. Abaphuhlisi babo banamava amahle ekuphenduleni kwendalo apho banokudala khona ii -apps ezinobungozi, ezigcweleyo, kunye nezihambisanayo ukuze zihlangabezane nemigangatho ephezulu yeshishini.
Kwikomkhulu: ECarlifonia eMelika
#hire phendula abaphuhlisi bomthonyama # yenza iinkonzo zophuhliso lwendalo #top 10 phendula iinkampani zemveli zophuhliso lweeasoftware #react inkampani yemveli yophuhliso losetyenziso #iinkonzo zophuhliso lweeapp.
Ukuqeshiswa kwabaphuhlisi bendalo abazinikeleyo kwiprojekthi yakho elandelayo. Njengenkampani ephezulu yophuhliso lwendalo sikunika eyona nkonzo ilungileyo ngokweemfuno zeshishini lakho.
phendula-umgca wemvelaphi ukuphuma
ezemidlalo ze-fox khowudi roku roku